प्रशिक्षण पल्ट। expectant आमा महसुस
गर्भावस्था केही अविश्वसनीय चमत्कार प्रतीक्षा एक रोमाञ्चक अवधि छ। तर expectant आमा, त्यहाँ चिन्ता र फिक्री गर्न धेरै कारणहरू छन्। जो को डर उल्लेख हुन सक्छ बीचमा जन्म को शुरुवात "छोड्न"। अक्सर, बित्तिकै रूपमा अस्पताल हतारमा एक रोचक स्थिति मा महिलाहरु, को भुँडी मा nagging दुखाइ महसुस तिनीहरूलाई जन्म pangs को शुरुवात विचार। तथापि, सधैं यस्तो लक्षण बच्चाहरु को आसन्न जन्म संकेत गर्छ। अक्सर यो सिर्फ एक प्रशिक्षण छ पल्ट। महसुस वर्तमान समयमा श्रम मा एक महिला द्वारा अनुभव ती धेरै समान एकै समयमा, तर दुखाइ कम तीव्र छ। अन्यथा, यो प्रक्रिया Braxton हिक्स contractions रूपमा चिनिन्छ।
को जन्म नजिक, बदतर गर्भवती आसन्न दुखाइ को ठूलो उनको डर हुन्छ। अगाडि निहित के, एक सानो मद्दत प्रशिक्षण पल्ट तयारी गर्न सक्नुहुन्छ केही विचार दिनुहोस्। तिनीहरूले महिलाको पीडा सीमा निर्भर गर्दा महसुस। त्यसैले, कसैले र तिनीहरूले कसैलाई महसुस गरे सक्दैन, तिनीहरूले एक वास्तविक चुनौती हुन्छन्। तर expectant आमा को एक परिणाम रूपमा कसरी दुखाइ नियन्त्रण गर्न, राम्ररी सास फेर्न सिक्न गर्न सक्षम हुनेछ, तर प्रसब समयमा यो आवश्यक हुनेछ।
यी के हुन् झूटा contractions? को गर्भाशय को मांसपेशिहरु को यो अल्पकालीन कमी। तिनीहरूलाई धन्यवाद, यसलाई पछि जन्म प्रक्रिया सुविधा जो छोटो र नरम cervix, बन्दछ।
प्रशिक्षण सुरु गर्दा के एक महिला महसुस झगडे? महसुस menstrual दुखाइ जस्तै। तथापि, तिनीहरूले भुँडी मा मात्र, तर पनि फिर्ता दिन हुन सक्छ। यो बिन्दु मा, expectant आमा जस्तै पेट कठोर, ठोस हुन्छ महसुस। यो uterine मांसपेशी तनाव कारण हो।
त्यहाँ अवस्थामा महिला चिन्तित छन् जहाँ छन् "यी दुखाइ, यो प्रशिक्षण पल्ट, वा टोन के हुन्?" यी दुई घटना अवश्य छन् बीच भिन्नता। को गर्भाशय को hypertonicity पछि - यो घटना सामान्य छ, र गर्भपात को जोखिम बढ्छ फलस्वरूप। यस मामला मा, गर्भाशय भ्रूण गर्न अक्सिजन को पहुँच बाधित जो केही समय को लागि अनिश्चय मा निरन्तर छ। को Hyper गर्न यसको विपरीत, प्रारम्भिक झगडे छोटो अवधि को, छ, हो मांसपेशिहरु काल2मिनेट भन्दा कुनै थप। साथै, तिनीहरूले सामान्यतया गर्भावस्था को 20 सप्ताह पछि, hypertonus साथै निदान गर्न गर्दा र गर्न सक्छन् प्रारम्भिक चरणमा थाल्छन्।
को जन्म नजिक, अधिक अक्सर गर्भाशय गर्न "रेल" थप स्पष्ट महसुस प्रशिक्षण पल्ट सुरु हुन्छ। 34 हप्ता मा, उदाहरणका लागि, तिनीहरूले श्रम को शुरू लागि गलत हुन सक्छ। यो अवधि पछि बच्चालाई पहिले नै राम्रो जन्म हुन सक्छ छ।
तसर्थ, expectant आमा सामान्य र प्रशिक्षण पल्ट बीच भेद गर्न आवश्यक छ। दुवै अवस्थामा Sensations समान छन्, तर त्यहाँ केही मतभेद छन्। पहिले, पहिले नै "प्रशिक्षण" समयमा, माथि उल्लेख रूपमा दुखाइ धेरै कम, बढ्दै सामान्य, होइन यसको विपरीत छ र। दोश्रो, Braxton हिक्स contractions जन्म PERIODICITY अवलोकन गर्दा, फाटफुट छन्। यसबाहेक, दुखाइ बिस्तारै प्रशिक्षण bouts समयमा परीक्षण गरे। यो गतिविधि को प्रकार परिवर्तन गर्न पर्याप्त छ: जस्तै एक बिट, शरीर को स्थिति परिवर्तन गर्न, सुत्न। सुरुमा प्रसब मा यस्तो manipulations मदत छैन। यस मामला मा, यो अस्पताल जान समय छ।
म kvass सुत्केरी आमाले पिउन सक्नुहुन्छ? दुई को लागि मेनु
Paypel-endometrial बायोप्सी - यो के हो? gynecology मा निदान प्रक्रिया
एक बच्चा गोदभराई लागि ऋषि।
के महिनावारी समयमा गर्न सकिँदैन: महिला स्वास्थ्य को लागि विशेष नियम
प्रमाणित स्वाद नाम भालु "Tequila Sauza"
को आवेदक गरेको सन्दर्भ। कलेज अस्ताना
तिल बीउ। उपयोगी गुणहरू
असामान्य ब्रश: मेपल ginnala
को बन्द ट्याब कसरी फर्कन? सबैभन्दा लोकप्रिय ब्राउजर को प्रयोगकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
बाश्कीर राष्ट्रिय पोशाक: विवरण, विशेषताहरु र घटना को इतिहास